ရီယိုဒီဂျနေးရိုး - I LOVE RIO DE JANEIRO - စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်အပေါ် ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ရဲ့ကြီးထွားလာအရေးပါပုံကိုသတိပြုမိ, ငါရီယိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူမျိုး, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်စီးပွားရေးပညာရှင်များများအတွက်သင့်လျော်သောမြို့တော်ရဲ့စီးပွားရေးကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များ၏ကျယ်ပြန့်, ကိုထောက်ပံ့ပေး LOVE ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သွားရန်နှင့်ပြည်တွင်းစျေးကွက်ကိုယဉ်ကျေးမှုနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုပေါ်အသုံးဝင်သောစိတ်ကူးများတိုးလာနားလည်မှုနှင့်အသိပညာပေးနှစ်ဦးစလုံးမှ, ထောက်ပံ့ကြသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ချဲ့ထွင်တဲ့နည်းပညာတွေနှင့်ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်များထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အောင်မြင်သောလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဘို့အသုံးဝင်သောအဆက်အသွယ်များနှင့်အတူ, အလယ်ဗဟိုအဆင့်ကနေရာယူထားကြသည်။ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်တိုက်ရိုက်စာဖတ်သူတွေကိုဆက်သွယ်ထားသောအသုံးပြုပုံဝက်ဘ်ဆိုက်လည်းစီးပွားကူးသန်းနှင့်ဒေသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအားပေးအားမြှောက်။
နောက်တိုးသဘာဝသယံဇာတများ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဆန်းသစ်တဲ့မက်ခရိုစီးပွားရေးမူဝါဒများနှင့်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောလူမှုရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနေရာတခုအဖြစ်ပို့ကုန်တင်ပို့မှုနှင့်ပစ္စုပ္ပန်ဘရာဇီးကိုတိုးမြှင့်ကူညီပေးခဲ့ကြသည်: ဘရာဇီးနှင့် ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့၏စီးပွားရေးသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းအားကောင်းဆည်းပူးကြသည်။
ဖွံ့ဖြိုးမှုနိမ့်ဒေသများ၏ကောင်းဖို့များအတွက်မဟာဗျူဟာများ, ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏အားကြီးသောကျောထောက်နောက်ခံနဲ့ ဘက်စုံသုံး-ဘီလီယံခန့်ထိုကဲ့သို့သောဆက်သွယ်ရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖြစ်ယေဘုယျအားဖြင့်အခြေခံအဆောက်အဦများတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်အစပျိုးဖက်ဒရယ်, ပြည်နယ်နှင့်စည်ပင်သာယာအစိုးရများ၏အစီအစဉ်အပေါ်ထိပ်ပိုင်းများမှာ - နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုဆွဲဆောင်နေတဲ့တက်ကြွတဲ့, စီးပွားရေးရာသီဥတုရရှိလာတဲ့ နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏။
ဘရာဇီးအစိုးရ, အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှအကူအညီများရာပူဇော်သက္ကာကိုကုလသမဂ္ဂအမစ်ရှင်ကိုဦးတည်သွားနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ဖက်စပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အာဖရိကနှင့်တောင်အမေရိကနိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်း. အသုံးပြုပုံကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်အဖြစ်ဘရာဇီးတွင်နေရာချထားပေးခဲ့သည်။
ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ဘရာဇီးယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်နှင့်ဟာအဓိက, ဘဏ္ဍာရေးစီးပွားဖြစ်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဗဟိုချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆောပိုလိုပြီးနောက်, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့တစ်နှစ်လျှင်ဘီလီယံ 150 Real မှာခန့်မှန်းတိုင်းပြည်၏အတွက်ဒုတိယကအဓိကစုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန်နှင့်အတူဘရာဇီးလ်မြို့ဖြစ်၏။ အဆိုပါမြို့ပြဒေသကဒုတိယအကြီးဆုံးအမျိုးသားရေးချမ်းသာကြွယ်ဝမှု၏အချက်အချာနှင့် ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ပြည်နယ်၏စီးပွားရေးအစွမ်းသတ္တိ၏ 70% ရှိပါသည်။
ဘရာဇီးဖက်ဒရယ်နိုင်ငံမြို့တော်ဖြစ်ခြင်းကနေ 1960 ခုနှစ်အထိသာအကျိုးအမြတ်နီးပါးနှစ်ပေါင်းနှစ်ရာအဘို့, ရီယိုနေတဲ့တက်ကြွအုပ်ချုပ်ရေး, ဘဏ္ဍာရေး, စီးပွားရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစင်တာကိုသို့တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။
ရီယိုကအဓိကပုဂ္ဂလိကနှင့်ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေး, ဆက်သွယ်ရေး၏ဌာနချုပ်မှာဖြစ်ပါသည်, နှင့်ဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီများသည်။ ထို Campos ဝှမ်း၌ပါသောဆီ၏မကြာသေးမီကရှာဖွေတွေ့ရှိအများအပြားဘရာဇီးနှင့်နိုင်ငံခြားစွမ်းအင်, ရေနံနှင့်ဓာတ်ငွေ့ကုမ္ပဏီ၏ပင်မအခြေစိုက်စခန်းဖြစ်ခြင်းရီယိုခဲ့သည်။ တကယ်တော့ဘရာဇီးရဲ့ subsalt တိုင်းဒေသကြီး, ဆားအထူအလွှာကိုအောကျတှငျရေနံသိုက်၏ကြီးမားသောရေနက်ဧရိယာ 100 ဘီလီယံစည်မှတက်ကိုကိုင်ထားနိုင်တဲ့ - Rio-based ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ကြီးမားတဲ့ဝယ်လိုအားပေးအပ်ခြင်း။
အဆိုပါမြို့တော်ကိုဦးဆောင်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းအလယ်ဗဟိုဖြစ်တယ်, ရီယို၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလှုပ်ရှားမှုများအိမ်ခြံမြေဖွံ့ဖြိုးရေး, ရန်ပုံငွေများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဘရာဇီးလ်အတွက်ဒုတိယအကြီးဆုံးစတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်များပါဝင်သည်။ 1845 ခုနှစ်တွင် Created, အ ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့စတော့အိတ်ချိန်း, ယနေ့သီးသန့်အစိုးရအာမခံအရောင်းအဝယ်ဖြစ်, ဘရာဇီး၌တည်လိမ့်ရန်ပထမဦးဆုံးစတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
သင်္ဘော, သတ္တု, သန့်စင်, ဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေနံဓာတုဆေးဝါး, ချည်မျှင်နှင့်အထည်, အစားအသောက်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ပရိဘောဂလုပ်ငန်းများမှာလည်းမြို့အခြေစိုက်ကြသည်။ ထို့အပြင်ဘရာဇီးဖျော်ဖြေရေး, ရုပ်မြင်သံကြား, ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေသည့်အဖွဲ့အစည်းများဗိုလ်မှုးမြို့ပြဒေသအတွက်စစ်ဆင်ရေးရှိသည်။
တစ်ဦးကိုအဓိကဆိပ်ကမ်း၏ရှေ့မှောက်တွင်ဘရာဇီးနှင့်တောင်အမေရိက၏အခြားဒေသများနှင့်အတူကမ်းရိုးတန်းကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာနှင့်အတူနိုင်ငံတကာသွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းများအရေးပါသောအချက်အချာဖြစ်ခြင်း ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ခဲ့သည်။
မြို့တော်ကိုရောနှောဘရာဇီးနှင့်နိုင်ငံခြားဧည့်သည်များနှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးကိုအဓိက destination သို့ဖြစ်သကဲ့သို့ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေးကနိုင်ငံတကာခရီးသွားလုပ်ငန်းများအတွက်အလားအလာစဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနှင့်တကွ, ရီယိုရဲ့စီးပွားရေးအသက်တာ၏အဓိကကျသည့်ရှုထောင့်ဖြစ်ကြ၏။ အဆိုပါမြို့, ထိုကဲ့သို့သောရန်ပုံငွေအဖြစ်ဝင်ရောက်လာဆောင်ခဲ့သော 2014 ခုနှစ်အတွက်ဘောလုံးကမ္ဘာတွင်ခွက်နှင့် 2016 ခုနှစ်တွင်အိုလံပစ်အဖြစ်အဓိကနိုင်ငံတကာဖြစ်ရပ်များ၏ hosting အတွက်၏ရလဒ်အဖြစ်အစိတ်အပိုင်းအတွက်, ဒီဧရိယာ၌သိသိသာသာကြီးထွားရန်မျှော်လင့်ဟိုတယ်သစ်များများစွာနှင့်ဖြစ်ပါတယ် တစ်ပြီးသားများပြားလာဈေးကွက်အလားအလာဖြစ်ပါတယ်။
ကမ်းရိုးတန်း ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ပြည်နယ်, အင်အားအကောင်းဆုံးခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ကမ္ဘာစီးပွားရေးစျေးကွက်တစ်ခုရှိပါတယ် - ဒါကြောင့်လည်းသူအအားလပ်ရက်တစ်နိုင်ငံလုံးနှစ်စဉ်သန်း 50 ဘရာဇီးခရီးသွားဧည့်အများစုများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံး destination သို့ဖြစ်ပါသည်။
သမိုင်းကြောင်းအရ, ဝန်ဆောင်မှုစက်မှုလုပ်ငန်း ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ရဲ့စီးပွားရေး၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အငယ်စားကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာနှင့်အတူအားလုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံးတိုးတက်နေတဲ့မြို့တော်ကိုစောင့်ရှောက်။ ကြီးမားတဲ့နှင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထုတ်လုပ်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးအစားအစာ, အဝတ်အစား, ကရိယာ, ပရိဘောဂ, စီးကရက်, သားရေပစ္စည်း, လက်ဝတ်ရတနာ, အနုပညာနှင့်လက်မှုပညာ။ မကြာသေးမီကအီလက်ထရွန်းနစ်နှင့်ကွန်ပျူတာထုတ်လုပ်ရေးစီးပွားရေးကိုတစ်ဦးပိုမိုအားကောင်းအခန်းကဏ္ဍမှစတင်လိုက်ပါပြီ။
ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများဟာ host ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, ရီယိုအတွက် 200,000 မှတ်ပုံတင်ထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကျော်ရှိပါတယ်။ အဲဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့တစ်ဦးကကျယ်ပြန့်အများစုထက်လျော့နည်း 100 ခန့်နှင့်အတူန်ထမ်း, အသေးစားနှင့်ဖြစ်ကြ၏။ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍများစက်မှုလုပ်ငန်း 10% နှင့်အရပ်ဖက်ဆောက်လုပ်ရေး 5% ခန့် 16% သည်အမြို့မြို့၌စုစုပေါင်းအလုပ်အကိုင်များ၏ 70%, commerce ကိုအကောင့်အသစ်များ၏ကျော်တက်ပါစေ။
ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ကိုလည်း 800,000 ကျော်လူများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အပေးသောနီးပါးခန့် 24,000 စက်မှုဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများအားမူလနေရာဖြစ်သည်။ တစ်ဦးကအများကြီးပိုကြီးတဲ့လူလတ်တန်းစားများနှင့်တစ်ဦးချဲ့ထွင်စီးပွားရေးမြို့အခွင့်အလမ်းအသစ်တခုသောပြည်၌အောင်, အဆင့်မြင့်ပညာရေးနှင့်အတူလူငယ်တစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များများအတွက်ဝယ်လိုအားမောင်းထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဘရာဇီးကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမေရိကန်တောင်ပိုင်းအိမ်ထောင်စုပေါင်းသှားရောကျနထေိုနှင့်တက်ကြွစွာ ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့နှင့်ဆောပိုလိုကဤတိုးချဲ့ရေး၏စိတ်နှလုံးမှာဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူကမ္ဘာ့စျေးကွက်သို့ချဲ့ထွင်ကြသည်။
ရီယိုအတွက်လက်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်သာတဲ့အချက်တွေပြည်တွင်းရေးစျေးကွက်၏တိုးချဲ့ရေးနှင့်ကုန်စည်ဝယ်လိုအား, ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, အရည်အသွေးမြင့်မားစျေးကွက်နှင့်ဖြစ်ရပ်များပလက်ဖောင်းနှင့်အခွက်တဆယ်ရရှိမှုတို့ပါဝင်သည်။
ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့လူဦးရေရဲ့ သာ. မြို့ပြဧရိယာအပါအဝင်သည့်အခါနီးပါးကို 12 သန်းလူဦးရောက်ရှိဖို့ခန့် 6.4 သန်းအထိလူဦးဖြစ်ပါသည် - အကောင့်သို့နှစ်စဉ်ရီယိုသွားရောက်ကြည့်ရှုကြောင်းဦးရေသန်း 1.6 ကျော်ဧည့်သည်များယူပြီးသည့်အခါတစ်ဦးပင်ပိုကြီးစားသုံးသူစျေးကွက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။
အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ 2014 နှင့် 2017 ခုနှစ်အကြားဘရာဇီးရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဏ္ဍတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ $ 488 ဘီလီယံအထိ R ကိုရှိလိမ့်မည်ခန့်မှန်း, ဤအများစုနိုင်ငံ၏အရင်းအမြစ်များကိုတစ်ဦးအလွန်ကျယ်ပြန် 80% နေထိုင်ရာ ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့အတွက်အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မည်။
ရီယိုကိုသင်္ဘောစက်မှုလုပ်ငန်း, လမ်းအခြေခံအဆောက်အဦများ, ဆိပ်ကမ်းများ, လေဆိပ်, ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်တိုးတက်မှုနှင့်သိသာထင်ရှားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းများကိုများအတွက်အခန်းခဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ မြို့တိုင်းပြည်အတွင်းတတိယအကြီးဆုံးဆိပ်ကမ်းနှင့်ရေကြောင်းခရိုင်ရရှိထားသူနှင့်ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုယင်း၏သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့်ချဲ့ထွင်မှုအဘို့အဆဲဖြစ်ကြ၏။
ကြီးထွားလာလူဦးရေနှင့် favelas ၏တိုးတက်လာသောအခြေခံအဆောက်အအုံ, ပူးတွဲနေထိုင်သူများ၏တိုးပွားလာင်ငွေနှင့်တကွ, ရီယိုရဲ့လျော့နည်းဖွံ့ဖြိုးပြီးဒေသတွေပိုပြီးစီးပွားကူးသန်းနှင့်ကုန်သွယ်ရေးဆွဲဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ယခုအသစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒေသခံစီးပွားရေးများခိုင်မာစေနှင့် tangibly နေထိုင်သူများ၏အသက်တာ၏ဝင်ငွေနှင့်အရည်အသွေးအတိုးပွါး။ လေ့လာရေးနှင့်ဒေတာကြီးထွားလာဝယ်လိုအားဒေသခံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးချဲ့ထွင်ရန်အခွင့်အလမ်းလုံလောက်သောထုတ်ပေးပြီးကြောင်းပြသနေသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှအဆတိုးပွားလာအကျိုးစီးပွားနှင့်ကတိကဝတ်ဟာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက်အားကောင်းနှင့်ပိုပြီးစည်းလုံးညီညွတ်သောရီယိုများအတွက်အလားအလာမြင်လျှင်, ဒေသခံ favela စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပြုစုပျိုးထောင်နှင့်ကူညီပံ့ပိုးရန်အစိုးရများနှင့်အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများကကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေမှာနှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်သိရသည်။ ဆွေးနွေးပွဲများ, အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်ဆွေးနွေးပွဲများကိုမှန်မှန်စွန်မြှင့်တင်ရန်နှင့်လက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့ဖို့အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြသည်။
Micro နဲ့အီး Pequenas (အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအထောက်အကူပြုရန်ဘရာဇီး Service) Empresas, သို့မဟုတ် Sebrae အဖြစ်Serviço Brasileiro က de Apoio, ကအဖြစ်ကောင်းစွာ, အစည်းအဝေးတွေကတဆင့် 60000 ကျော်လုပ်ငန်းရှင်များ supporting စီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုး 2011 ခုနှစ်တွင် 1996 ခုနှစ်ကတည်းက pacified လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ရာထူးတိုးသိရသည် လျာထားသောအကြံဥာဏ်နှင့်လေ့ကျင့်ရေး၏ပြဋ္ဌာန်းချက်အဖြစ်။
ရီယိုရဲ့စီးပွားဖြစ်ဂုဏ်သတင်းနှင့်အလားအလာအစဉ်အမြဲတိုးတက်မှု၏တစ်ခွအေနအေပျော်မွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်သကဲ့သို့, မြို့ရဲ့သာယာလှပ setting ကိုစားသုံးသူများ, ထုတ်လုပ်သူများ, သူတို့၏နယ်ပယ်များတွင်နိုင်ငံတကာကိုရှုခင်းကိုပုံဖော်ဖို့အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများသကဲ့သို့မြေသြဇာမွေးမြူရေးမြေပြင်ပြုမူ။
တိုးမြှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကျိုးစီးပွားအလငျး၌, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့, ဘယ်မှာစားသုံးသူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများဝေစုစိတ်ကူးများဂုဏ်သိက္ခာဝိုင်းနှင့်သဘောတူညီချက်များတစ်အရေအတွက် host ကိုကစားကွန်ယက်နှင့်တီထွင်။ အဆိုပါမြို့တော်ကိုတရားမျှတပြီးရေနံ၏ Institute မှ, ဓာတ်ငွေ့နှင့်ဇီဝလောင်စာအဖြစ်နှစ်ပတ်လည်, နိုင်ငံတကာ Navalshore မျှတသဖြင့်ဧည့်ခံ 1500 ကျော်ကသင်တန်းသားများနှင့်အတူကွန်ဖရနှစ်နှစ်တကြိမ်ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရရှိထားသည်။
အားကစားဝတ်စုံများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများများအတွက်အရေးပါသောဗီတာမင်နှင့်ပရိုတိန်းထုတ်ကုန်များအတွက်တရားမျှတ, အခြားသောကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဆက်စပ်သောထုတ်ကုန်များအတွက်ခိုင်ခံ့သောစျေးကွက်ကရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်း, ရီယိုအတွက်ဖက်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းအတိတ်နှစ်အတွင်းအနံနှင့်ဂုဏ်သတင်းကြီးထွားလာခဲ့ပြီး, မြို့ယခုဖက်ရှင်ဝိုင်းနှင့်ဖြစ်ရပ်များအမျိုးမျိုးအိမ်ရှင်အဖြစ်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဒိုင်းနမစ်ပြောင်းလဲ၏အလငျး၌, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ဘယ်မှာစားသုံးသူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများကွန်ယက်နှင့်ရှယ်ယာအကြံဥာဏ်များနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုဂုဏ်သိက္ခာဝိုင်းနှင့်သဘောတူညီချက်များအရေအတွက်အား host ။
သူတို့ကိုများထဲမှ 1500 ကျော်ကသင်တန်းသားများနှင့်အတူနှစ်နှစ်တကြိမ်ရေနံရှင်းလင်းပွဲအဖြစ်စက်မှုစီးပွားဖြစ်နှင့်ဖက်ရှင်ဝိုင်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဖြစ်ရပ်များကိုမွို့နှငျ့ပြည်နယ်သားအပေါင်းတို့ဒေသများရှိစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုနှင့်စီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုများမြှင့်တင်ရန်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံတွဲပြီးဤသူအပေါင်းတို့ကို, အသေးစိတ်အတွက် divulged ကြသည်။